မြန်မာနိုင်ငံမကြီးပွါး ရသည့်အကြောင်းများ | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
1 Reply	မြန်မာနိုင်ငံမကြီးပွါး ရသည့်အကြောင်းများ
(၁၁)အစိုးရကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဝက်ခန့်မှာ ပြည်သူများရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသူများ မဟုတ်ပဲ ခွဲတမ်းရနှင့် မိုးကျရွေကိုယ်ဝန်ကြီးဝန်ကလေးများဖြစ်နေခြင်း
(၁၂)မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့အားလုံးလောက်နီးပါး ကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရန်ပုဂ္ဂလိက ကုမ္မဏီများသို့ရောင်းချထားသော်လည်း ယခုထိပြည်သူများသိရန်မကြေညာခြင်း
(၁၃)ဆီးဂိမ်းတွင်မျှော်မှန်းထားသည့် အတိုင်းရွှေတံဆိပ် ၁၀၀ ရသည့်တိုင်ကုန်ကျစရိတ်ကျပ်ဘီလျံ ၁၀၀ကျော်သဖြင့် ရွှေတံဆိပ်တစ်ခုလျှင်နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာမှ ကျပ်သန်းတစ်ထောင်ကျော် အကုန်အကျခံရခြင်း( အားကစား အဖွဲ့ချုပ်များမှ အကုန်အကျခံထားရသည့်ငွေများမပါသေး)
(၁၄)စစ်ဗိုလ်များဓါးမြဗိုလ်ဖြစ်ကုန်ခြင်း(လက်သွေးသည်ဟုထင်သည်၊အောင်မြင်ပါက စစ်ဗိုလ်လုပ်မည့်အစား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထူထောင်ပြီး ကါးပါမစ်တောင်းမည့်သဘောရှိသည်)
(၁၅)၂၀၁၄မတ်လ၃၁ တွင် သစ်အလုံးလိုက် နိုင်ငံခြားမပို့ရဆိုသဖြင့်၂၀၁၃ တစ်နှစ်လုံးတက်သုတ်ရိုက်ပို့နေခြင်း(စာရင်းဇယားများအရ စစ်အစိုးရလက်ထက်၁၀နှစ်ပို့သည့်ပမာဏထက် ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်သုံးနှစ်ပို့သည့်သစ်ကများနေခြင်း) (ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်) (၁၆)နိုင်ငံရေးပုဒ်မ၅(ည)အစားပုဒ်မ
(၁၈)ကိုအစားထိုးသုံးစွဲခြင်း (၁၇)နိုင်ငံတော်အာဏာကိုယောက္ခမအမွေပေးထားသည်ဟုထင်နေကြခြင်း (၁၈)နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာကိုကြွားလုံးများအတွက်သာအသားကုန်သုံးစွဲနေခြင်း (၁၉)နေပြည်တော်အမြန်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရန် နတ်စင်ဆောက်၍ ပသီမောင်နှမကိုတာဝန်ပေးထားခြင်း (၂၀)သမ္မတ လက်မှတ်ထိုးသည်ဖြစ်စေ မထိုးသည်ဖြစ်စေ ၂ ပတ်ကြာလျှင် ဥပဒေအားလုံး အတည်ဖြစ်ခြင်း(စာရွက်အကုန်ခံပြီးများပို့နေရသေးတယ်) (ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်) (၂၁)အဖိုးတန်သတ္တုများပါသောသဲနှင့်မြေကြီးကိုနိုင်ငံခြားသို့အလကါး ပဲတင်းဈေးဖြင့်ရောင်းခြင်း (၂၂)အရှေ့မြောက်အရပ်ကိုကိုးကွယ်ခြင်း (၂၃)အနောက်ဖက်ခြံစည်းရိုးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမပြုပြင်ခြင်း (၂၄)ငွေငါးသိန်းပေးလျှင်နိုင်ငံသားကဒ်တစ်ခုအလွယ်တကူရနိုင်ခြင်း (၂၅)အိမ်ယာစီမံကိန်း ဖော်ဆောင်သူများ မြေဈေးကေါင်းသည့်အချိန်တွင် ပန်းခြံနေရာများတွင်အိမ်ဆောက်ရောင်းစားသည်ကို အရေးမယူနိုင်ခြင်း (အားလျှင်ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည်)
This entry was posted in Artical on December 18, 2013 by koshwehtoo.	Post navigation
← ဦးပိုင်ဘယ်လဲ? ဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ?
If the lady is next President of Burma →
One thought on “မြန်မာနိုင်ငံမကြီးပွါး ရသည့်အကြောင်းများ”	နီဝါခေါင် January 4, 2014 at 6:14 pm	သူခိုးတွေများနေလို့